Somali - from WN Network
Maxaa muhiim ka dhigay xiriirka Soomaaliya iyo Turkey?
Madaxweynaha Somaliya Xassan Sheekh Maxamud ayaa Arbacadii shalay magaalada Ankara kulan kula yeeshay dhiggiisa Turkiga, Recep Tayyip Erdogan. ...
Bandhigga VOA: Sugidda Ammaanka Soomaaliya
Barnaamijka�Bandhigga�VOA waxa uu toddobaadkan saabsan yahay suggidda ammaanka Soomaaliya oo ah caqabadda ugu weyn ee dalka haysata. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. ...
Dadweyne careysan oo dibadbax rabshado wata ka dhigay Beledxaawo
Wararka ka imanaya magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dadweyne careysan ay dab qabadsiiyeen xarunta maamulka degmada iyo gawaari halkaasi taalay. ...
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson oo ku dhowaaqay is-casilaad
Boris Johnson ayaa maanta iska casilay xilka hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka ee Britain, taasi oo dhabbaha u xaareysa doorashada ra’iisul wasaare cusub kadib markii wasiiro dhowr ah ay iska casileen dowladdiisa ay fadeexadaha hareeyeen. ...
Idaacadda Duhurnimo waxaad qeybta hore ku maqli kartaa wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo Caalamka. Qeybta danbe ee idaacaddu waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijyo ku saabsan dhalinyarada maanta. ...
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson 'oo maanta is-casilaya'
Boris Johnson ayaa maanta ku dhowaaqi doona inuu iska casilay xilka ra’iisul wasaraaha Britain kadib markii ay ka kala tageen wasiiradiisa iyo xildhibaanada xisbigiisa Conservative-ka, kuwaasi oo sheegay inuusan u qalmin inuu wax sii maamulo. ...
Maxaa kasoo baxay wada-hadalladii Xasan Sheekh iyo Erdogan?
Madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Turkey Xasan Sheekh Maxamuud iyo Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Ankara ee dalka Turkiga. ...
Qiimaha xoolaha ee suuqyada Dhadhaab oo si weyn hoos ugu dhacay
Qiimaha xoolaha nool ee suuqyada xeryaha Dhadhaab ayaa sameeyay hoos u dhac aad u ballaaran iyadoo lagu jiro u diyaar garowga ciidda oo inta badan aad loo iibsado xoolaha nool. ...
Soomaalida Toronto oo ka walaacsan cudurka Monkeypox oo halkaas ku fidaya
Xilli dunida ay kasoo kabaneyso aafada uu reebay COVID-19 labadii sano ee lasoo dhaafay, ayaa haddana waxaa walaac hor leh keenaya xanuunka loo yaqaanno Monkeypox oo dunida si aad ah ugu faafaya. ...
Madaxweyne Buhari oo la kulmay Trump
Madaxwaynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa la kulmay madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump. Kulanka labada masuul ayaa ka dhacay aqalka cad ee looga arrimiyo
Madaxweyne Buhari oo gurigiisa shaqada ka wada
Ka dib markii uu ka soo laabtay fasax caafimaad oo saddex billood ah oo uu ugu maqnaa magaalada London iyadoo aan la sheegin xannuunka haya, Madaxweynaha Nigeria Muhamadu Buhari
Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo
Idaacadda Fiidnimo ee Evening Edition waxaad ku maqashaan wararkii ugu danbeeyey ee Soomaaliya iyo Caalamka, barnaamijyo iyo wareysiyo ka turjumaya dhacdooyinka waqtigaasi ka dhacaya daafaha Dunida. ...
Wareysi: Faah-faahin ku saabsan safarka Xasan Sheekh ee Turkey
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa ku sugan dalka Turkiga, halkaasi oo uu maanta kula kulmay dhiggiisa dalkaas Recep Tayyip Erdogan. ...
Doorashada Kenya: Siyaasiyiinta Soomaalida oo walaacsan
Ayadoo wax ka yar mudda bil ah ay ka dhimantahay xilliga dalka Kenya ay ka dhacayso doorashada guud ee
Wadahadallo dhexmaray Muuse Biixi iyo madaxda xisbiyada
Wajigii koowaad ee wada-hadallada u dhexeeya Madaxweynaha Somaliland Muse Biixi Abdi iyo Xisbiyada Mucaaridka ah ee Waddani iyo UCID ayaa maanta ka dhacay Xarunta Madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa. ...
Sarkaal sare oo lagu dilay qarax ka dhacay Afgooye
Qarax ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada Daraawiishta ee degmadaas. ...
Qarax ka dhacay Muqdisho oo lagu dilay Xaashi Cumar oo 16 sano ku xirnaa Talyaaniga
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ka dhacay degmada Dharkaynlay duhurkii maanta uu ku geeriyooday Xaashi Cumar Xasan oo horey muddo ka badan 16 sano ugu soo xirnaa dalka Talyaaniga. ...
Faransiiska oo soo celiyey xaasaska iyo caruurta dagaal-yahanada Daacish
Dowlada Faransiiska ayaa sheegtay in Faransiiska lagu soo celiyey 35 caruur ah iyo 16 hooyooyin ah oo ku jirey, xeryo ku yaalla Waqooyiga Suuriya oo lagu hayo qoysaskii dagaal-yahanadii kooxdii Daacish ee ka dagaallami jirtay Suuriya iyo Ciraq. ...
Sidee isu maareynayaan beeraleyda Jawiil xilli ay abaaro ku dhufteen dalka?
Iyadoo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro saameyay dadka iyo duunyada, ayaa beeraleyda qaar waxay isku dayayaan inay si kale wax soo saarkooda u weeciyaan. ...